China Cabinet door tombokase tombokase sy mpanamboatra | Tianzheng
Ny tombo-kase varavaran'ny kabinetra dia vita amin'ny epdm vy vy, spaonjy spaonjy, firafitra spaonjy matevina amin'ny alàlan'ny asa-tanana avo lenta. Miaraka amin'ny faritra malama sy fananana tena tsara amin'ny fanoherana ny fahanterana, fanoherana ny toetrandro ary fanoherana ny ozon. Fandeferana amin'ny lafiny henjana tsara ary manana fahamendrehana sy fahaiza-mampifanentana tsara amin'ny sehatra tsy mitovy. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famehezana sy ny bumper. Ahenao ny fidiran'ny rano sy ny rivotra, esika fanamafisam-peo matevina, hamafin'ny avo roa heny ary tsy azo idirana, vokatra azo antoka - fivoahana, fahamendrehana avo lenta. Afaka mamatsy sy manamboatra ny vokatra arakaraka ny takian'ny mpanjifanay izahay. Nahazo iso9001 sy iatf16949 izahay, mampanantena kalitao avo sy fandefasana tsara indrindra izahay.
Ny tombo-kase varavaran'ny kabinetra dia vita amin'ny epdm vy vy, spaonjy spaoro, firafitra spaonjy matevina amin'ny alàlan'ny asa tanana mandroso. Miaraka amin'ny faritra milamina sy fananana tsara amin'ny anti-antitra, anti-toetrandro ary anti-ozon.
Fandeferana amin'ny lafiny henjana tsara ary manana fahamendrehana sy fahaiza-mampifanentana tsara amin'ny sehatra tsy mitovy. Izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famehezana sy bumper. Mampihena ny fidiran'ny rano sy ny rivotra, ny famehezana matevina malefaka, ny hamafin'ny avo roa heny ary ny tsy azo ihodivirana, ny vokatra azo avy amin'ny fivoahana, ny fahamendrehana avo lenta. Afaka manome sy manamboatra ny vokatra arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifanay izahay. Izahay nahazo iso9001 sy iatf16949, mampanantena kalitao avo sy fandefasana tsara indrindra izahay.
Fanoherana ny maripana: EPDM: -40 ℃ ~ + 120 ℃
Loko: mena, manga, mainty, maintso, volomboasary sns Colour isan-karazany (azo ahitsy arakaraka ny fampiharana)
Ny habe sy ny endrika: namboarina ho toy ny sary na santionany na akora fototra an'ny mpanjifa
Tahan'ny fanoherana rano: 100%
Dingana famokarana: fananganana extrusion
Karazana vokatra: fizarana U, mombamomba ny H, sns.
Function: tombo-kase, hiarovana amin'ny bibikely, rivotra, rano, fifandonana ary insulated feo
Famonosana: horonana sy baoritra naondrana matanjaka na arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa
Tombo-kase tombo-kase ho an'ny varavaran'ny kabinetra / tombo-kase varavaran'ny kabinetra dia misy fantsom-pamokarana epdm solid "U" ary tariby eponjy spaonjy epdm, ary koa ny clip vita amin'ny metaly manokana sy ny fikitikitihana ny lela mba hikolokoloana tsara kokoa, tombo-kase avoakan'ny extruded no tena ampiasaina ao anaty kamio , traktera, fiara, milina, varavarana fiara kabinetra, ny taxi-brousse, sarety golf, ny atv fender, traktera, fitaratra vita amin'ny takela-by vita amin'ny moto .etc
Atokàny ny tombo-kase vita amin'ny rubber. Avy eo, esory ny lamosina miorina amin'ny sisin'ny fametahana ny tombo-kase vita amin'ny fingotra ary tsindrio eo amin'ny toerany ny tombo-kase. Avereno eo am-baravarana sisa ity dingana ity. Farany, zahao mba hahazoana antoka fa misy fifamatorana tery eo anelanelan'ny varavarana sy ny tombo-kase fingotra, avy eo dia hamita ny fametrahana isika.
Vokatra mitovy amin'izany
Teo aloha: Tady famehezana mekanika
Manaraka: Tombo-kibon'ny Foma
Tady tombo-kase varavarana kabinetra ao an-dakozia